Nhau - Ungaita Sei Nekukosha KweValve?
Kana mudhudhudhu akatasva kwenguva yakareba, iyo vharuvhu yeinjini inowanzooneka, yakakura kwazvo kana diki kwazvo chiitiko, kuti uwane chikonzero, unofanirwa kubvunza ruzivo rwakawanda, mutengesi wevheji yemudhudhudhu kuti akupe ongororo yakapusa.
Kufuridzirwa kwekusagadziriswa kwevhavhavha yeinjini painjini
Huru kana diki injini zvikamu mavharuvhu mudhudhudhu Chibvumirano chinokanganisa mashandiro einjini. Kunonoka kuvhura uye kuvhara kwekutanga kwevhavha yekudyiwa: nekuda kwekusakwanira kwekuvhura kwevhavha, huwandu hwekuwana hwakataurwa nemusanganiswa unotsva unoderedzwa, zvichikonzera kukundikana kwesimba reinjini.
Yakakura yekuzadza vharuvhu (ndiko kuti, iyo vheji yekuvhura nguva yakapfupikiswa): mune yekuzadza maitiro, inokonzeresa kupera kupera, kukwana inflation, yakawedzera mafuta jecha, yakawandisa muchina tembiricha, simba kuderera, uye kugogodza kwevhavha, inokanganisa hupenyu hwebasa. yezvikamu.
Kutanga kuvhura uye kunonoka kuvhara iyo mudhudhudhu injini yekudyiwa vharuvhu(iyo nguva yekuvhura vharuvhu yakareba): inokonzeresa yakavharika vharuvhu kuvhara uye mweya leakage, iyo inoderedza kumanikidza uye injini simba. Muzviitiko zvakakomba, vharuvhu ichagadzira huwandu hwakawanda hwekuisa kabhoni kana hutsinye, kuitira kuti humburumbira husakwanise kushanda zvakajairika.
Dhizaini yekudzimisa vharuvhu: inotungamira kune yakasununguka vharuvhu kuvhara uye kubuda kwemhepo muNanchang, saka kupisa hakuna kukwana uye simba rakadzikiswa. Dzimwe nguva pachave neanopedza pombi kuputika kwechiitiko.
Maitiro ekugadzirisa nekukuvara kwemidhudhudhu injini vharuvhu zvikamu
1. Musoro wevhavha yakatsemuka kana kubviswa, iyo inofanirwa kutsiviwa.
2. Mushure mekunge vharuvhu yetsiva yekupedzisira kumeso yasakara, inogona kuve pasi pane yekunze cylindrical grinder uye inoshandiswa mushure mekutsetseka kwenzvimbo yadzoreredzwa.
3. Iyo yekukotama degree revhavha yetsvimbo inodarika 0.03mm. Kana kukanganisa kuri pamusoro pevharuvhu kukapfuura 0.02mm, bulge yacho inogona kugadziriswa nekuiisa pane yekudhinda yemanyorero wozoongororwa nechiratidzo chekufona pane simbi yakaita V-kusvika yagona.
4. Kana paine nhema kabhoni uye grey lead oxide pane iyo vharuvhu koni pevhu, inogona kunyoroveswa muparafini, yozobviswa neinotsvaira yemuti kana bhurasho remhangura mushure mekunge yanyorova.
5. Kana iyo vharuvhu tsvimbo isina kunyanya kusakara uye kutsauka kwekutenderera uye cylindricity haina kudarika 0.03mm, iyo vharuvhu tsvimbo inogona kukwenenzverwa kune yekugadzirisa saizi pane isina nzvimbo isina kugaya muchina, uye wozogadziriswa ne chrome yakanamirwa nzira.
6. Kurova zvishoma, makomba, nezvimwewo pane iyo vharuvhu koni nzvimbo inowanzo bviswa nekukuya kweruoko. Usati waikuya, vharuvhu, chigaro chevhavha, uye gwara rinoshandisa peturu yakachena, uyezve pane iyo vharuvhu koni yakaputirwa neakakora kukuya kunama, nekumonyorwa kwerabha kutora iyo yepamusoro vharuvhu kutenderera kasingaperi uye kuchinja chinzvimbo, garo, makomba, nezvimwe kukuya kunze.
Kana mhete chena ikaonekwa pane vharafu koni, iyo vharuvhu inonatswa nekunaka kukuya kunama. Pekupedzisira sukurudza peta nepeturu, isa mafuta, nekuikuya kwemaminetsi mashoma.
7. Yakadzika gomba, makomba, uye makwapa pane vharafu conical pamusoro inofanirwa kukwenenzverwa pane vharuvhu kupora muchina. Kana iyo michina iri pamusoro isipo, vharafu inogona zvakare kunge inosunga uye iyo yekumanikidza inogona kuyerwa necollet iri pabhenji chibooreso, diki lathe, kana ruoko rwemagetsi chibooreso. Ipapo vharuvhu inogona kutanga. Izvo zvinokanganisa zvinogona kumisikidzwa padivi peiyo conical nefaera rakatsetseka faira, uye iyo conical pamusoro inogona kukwidziridzwa netaundi ye00 yakanaka emery jira pane iyo faira. Kumhanyisa kumhanya hakufanirwe kuve kwakanyanya, kufamba kunofanirwa kuve kwakatsetseka Kana mupendero wepamusoro wevhavha ukawanikwa uri pasi pe0.5mm gobvu kana kumonana, inofanirwa kutsiviwa.
Maitiro ekuita nekukuvara kune mudhudhudhu injini vharuvhu zvikamu?
(1) Isai hutete hutete hwemafuta matsvuku kana oiri bhaipiringi pane vharafu conical pamusoro, uye zvinyoronyoro pusha vharafu pachigaro chevhavha uye tenderera kwe1 / 4 kutendeuka usati waburitsa. Kana paine mhete yeiri inoenderera tsvuku mafuta kana bhairiprinta mafuta mamaki pachigaro chevhavha zvinoreva kuti kuiswa chisimbiso kwakanaka.
(2) Iine penzura yakapfava (4B kana 5B) dhonza mitsara yakati wandei pane iyo vharuvhu koni pamusoro, wozobatana nechigaro chevharuvhu tenderera 1/4 kutendeuka mushure mekubuditsa, senge mitsara yepenzura pane vharafu koni yakatemwa off, inoratidzawo chisimbiso chakanaka.
Kana iwe uchida kuwana rumwe ruzivo nezve yakanaka mhando injini vharafu, ndapota usazeza kutibvunza.